Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina mankany AlUla avy any Dubai sy Koety amin'ny flynas izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Koety • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE
Flynas dia nandefa sidina iraisam-pirenena voalohany mankany AlUla.
Ny sidina voalohany mankany AlUla dia hotokanana amin'ny 19 Novambra 2021, avy ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Dubai mandritra ny lanonana manokana izay hankalaza ny tantara sy ny lova navelan'i AlUla ary hampiroboroboana ny serivisy fitsangatsanganana an-habakabaka nahazo loka an'i flynas.
Manomboka ny 19 Novambra 2021, ny zotra iraisam-pirenena voalohany mankany AlUla dia hiainga avy any Dubai sy Koety.
Ny sidina voalohany amin’ny 19 novambra no fotoana hifanandrify amin’ny hetsika mozika manaraka any Maraya.
Hiaka-tsehatra mivantana ao amin’ny Maraya amin’io daty io ihany koa i Faia Younan, ilay tanora soprano sy ny tarika sangany maneran-tany.
Flynas, zotram-piaramanidina nasionalin'ny Saodiana ary zotram-piaramanidina mora vidy any Afovoany Atsinanana, dia nanambara ny fanitarana ny sidina farany indrindra, anisan'izany ny sidina iraisam-pirenena mivantana voalohany mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena AlUla.
Manomboka amin'ny 19th Novambra 2021, ny zotra iraisam-pirenena voalohany mankany AlUla dia hiainga Dubai ary Koety. Ny lalana an-trano nampidirina ao anatin'ny fanitarana dia ahitana an'i Riyadh, Dammam ary Jeddah. Ny fanambarana dia manamarika ny fotoana voalohany hankafizan'ny mpandeha iraisam-pirenena ny fidirana mivantana amin'ny iray amin'ireo toerana arkeolojika sy manan-tantara indrindra eran-tany.
Hotokanana ny 19 ny sidina voalohany mankany AlUlath Novambra 2021, nanomboka tamin'ny Dubai International Airport mandritra ny lanonana manokana izay hankalaza ny tantara sy ny lova navelan'i AlUla ary hampiroborobo flynas' serivisy fitsangatsanganana an-habakabaka nahazo loka.
Naneho hevitra momba ity zava-bita ity, CEO ao amin'ny flynas Hoy Andriamatoa Bander Almohanna hoe: “Faly izahay manao an'i AlUla ho mora idirana kokoa amin'ny mpandeha rehetra ao amin'ny faritra, toerana iray tena miavaka ary tsy mitsahatra manaitra na dia ireo mpandeha efa za-draharaha aza.” Nanampy izy avy eo hoe: "Matoky izahay fa ny fiaraha-miasa amin'ny Royal Commission for AlUla dia ho iray amin'ireo anton-javatra maro manampy amin'ny fanatrarana ireo lasibatra fatra-paniry laza ao amin'ny Saudi Vision 2030 izay mampandroso ny toeran'ny Fanjakana amin'ny maha-mpitantana ny fizahantany eo amin'ny faritra sy maneran-tany."
Naneho hevitra i Phillip Jones, Lehiben'ny Fitantanana ny Destination sy ny Marketing ho an'ny Vaomiera Royal ho an'ny AlUla (RCU), "Nandritra ny an'arivony taona maro, i AlUla dia sampanan'ny sivilizasiona. Ny oasis tranainy dia nandray ireo mpandeha sy mpifindra monina mba hizara entana, hevitra ary hanangana vondrom-piarahamonina. Zava-dehibe ho an'ny AlUla androany satria ho eo amin'ny zotra iraisam-pirenena indray isika. Ny mpitsidika dia afaka miditra mivantana amin'ny AlUla miaraka amin'ny sidina mivantana flynas avy any Dubai sy Koety, manantena izahay ny hampiditra mpitsidika bebe kokoa amin'ny maha-tokana ny toerana haleha.
Ny sidina voalohany tamin'ny 19th Ny volana novambra no fotoana hifanandrify amin’ny hetsika mozika manaraka ao Maraya. Hiaka-tsehatra mivantana ao amin’ny Maraya amin’io daty io ihany koa i Faia Younan, ilay tanora soprano sy ny tarika sangany maneran-tany.
Ny fandaharam-potoanan'ny sidina iraisam-pirenena sy an-trano avy any/ho any AlUla dia:
Sidina 4 isan-kerinandro eo anelanelan'i AlUla sy Riyadh
Sidina 3 isan-kerinandro eo anelanelan'i AlUla sy Dubai
Sidina 3 isan-kerinandro eo anelanelan'i AlUla sy Jeddah
Sidina 3 isan-kerinandro eo anelanelan'i AlUla sy Dammam
Sidina 2 isan-kerinandro eo anelanelan'i AlUla sy Koety
Miaraka amin'ity zava-bita vaovao ity, ny flynas dia mamerina ny fanoloran-tenany amin'ny fanolorana safidy ho an'ny toerana mahasarika sy tadiavina mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpandeha. Ankoatr'izay, ny flynas dia mikasa ny hanaraka ny fitomboan'ny fangatahana eo amin'ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahantany izay antenaina hahita fiverenana lehibe amin'ny dingana ho avy rehefa manohy miverina amin'ny fiatrehana ny valan'aretina COVID-19 ny firenena.